Fampianarana fototra hianaranao ny fomba fampiasana GIMP | Famoronana an-tserasera
Anisan'ireo fitaovana azontsika ampiasaina amin'ny graphic design, GIMP foana no tao ambadika. Izany dia satria amin'ny ankapobeny efa zatra programa hafa ny olona, sarotra amin'izy ireo ny fahazarana amin'ny interface hafa sy ny fomba fampiasana ny asany amin'ny fomba hafa tanteraka, ka mety ho toa GIMP sarotra kokoa noho ny programa fanovana na famolavolana hafa.
Na dia somary sarotra aza izany ary mitaky fotoana bebe kokoa hianarana hampiasa an'ity fitaovana ity dia azontsika atao ny mandinika izany ity programa ity no iray ho an'ny asa fanovana sary tsotra rehetra ary koa hanao asa mandroso bebe kokoa ho an'ny famolavolana sary raha vao voafehintsika ilay programa.
1 Noho io antony io, ity lahatsoratra ity dia mitondra anao fampianarana fototra hianaranao ny fomba fampiasana GIMP
1.2 Asa lahasa
Noho io antony io, ity lahatsoratra ity dia mitondra anao fampianarana fototra hianaranao ny fomba fampiasana GIMP
GIMP dia fitaovana azo ampiasaina amin'ny rafitra miasa Windows, Linux ary MacAzontsika atao ihany koa ny misintona azy mivantana avy amin'ny tranokala ofisialiny, amin'ny alàlan'ny fampiasana BitTorrent, ny fizotry ny fametrahana dia mitovy amin'ny programa Windows hafa.
Raha misafidy ny safidy hanatanterahana fametrahana manokana, azontsika atao ny manova ny toerana toerana itehirizantsika ny programa, fa ankoatr'izay dia hanome soso-kevitra aho esory tsy misy na inona na inona mba hankafizanao tanteraka ny programa. Ny teboka iray hafa azontsika asongadina rehefa mametraka ny programa dia ny ahafahantsika mampifandray ny GIMP amin'ireo karazana rakitra fisie.
Raha vao manomboka ny programa isika dia mahita an'izany GIMP dia tsy manana varavarankely fampiasana tokana, toy ireo programa Windows hafa, saingy misy telo. Mazava ho azy fa mety hampikorontana ity, ary hamaha azy io dia mandeha amin'ny menio isika "am-baravarankely”Ao amin'ny varavarankely lehibe ary mifamadika amin'ny maody fikandrana tokana isika.
Hatramin'ny nanaovantsika izany dia afaka manana endrika mahazatra kokoa isika ary mandinika amin'ny antsipiriany ny faritra samihafa amin'ny interface interface, izay ahafahantsika manonona faritra telo lehibe.
Izahay dia mahita sidebar eo ankavia izay mampiseho aminay ireo fitaovana GIMP sy ireo safidin'ireo fitaovana nofinidinay tamin'ny fotoana rehetra.
Manana isika sidebar amin'ny ilany ankavanana, izay ahafahantsika miditra amin'ny menus rehetra amin'ny sosona, ny zotra ary ny fantsona, ny tantaran'ny fiovana ary eo amin'ny farany ambany ananantsika, ny takelaka borosy, ny lamina ary ny gradients.
Ny faritra afovoany no ahitantsika ny sary na sary izay iasantsika amin'izao fotoana izao. Mazava ho azy ireo takelaka ireo dia azo namboarinaAzontsika atao ihany koa ny mametraka ireo singa samihafa amin'ny filaharana tena tiantsika indrindra, amin'ny alàlan'ny fisintomana sy fametrahana ireo singa ireo eo alohany na any ambadiky ny hafa.
Misy ny fiasa fototra izay ilaintsika amin'ny ankapobeny atao ao amin'ny GIMP ary noho izany manokatra sary avy amin'ny menio fisie izahay, izay hisehoany amin'ny habeny feno ao amin'ny faritra afovoan'ny programa. Azo inoana fa hiseho mibodo ny faritra afovoany iray manontolo izy io, saingy azontsika atao ny mampihena ny habeny avy amin'ny menio fijerena, ny fampiharana na koa amin'ny fitaovana hanitarana eo amin'ny sisin'ny sisiny ankavia.
To be able hanova habe ny sary, mankany amin'ny sary menio, mizana ny sary. Ao amin'ny varavarankely misokatra dia afaka miditra ireo refy vaovao tiantsika indrindra izahay, hoy ilay sary, amin'ny alàlan'ny haben'ny fandrefesana hita eo akaikiny.
Eo akaikin'ny toerana misy ny refesina ny haavony sy ny sakany Ho hitantsika ny kisary iray amin'ny endrika rojo, izay hanondro fa rehefa manova ny sakan'ny sary dia mifanaraka amin'ny fitoviana izy io, manalavitra ny endrika maloto ary raha tsy miova ho azy ny sandany dia tsindrio ny bokotra kiheba.
Raha te hamboatra sary dia tsy maintsy ataontsika fotsiny misafidy fitaovana cropping amin'ny sidebar ankavia ary manorisa ny sary tiana tazomina ary raha te-hitahiry ilay sary isika dia mazàna no ataontsika ao save as, fa mety amin'ny endrika GIMP.
Araka ny hitanao, tsy misy mora kokoa noho ny mampiasa an'ity fitaovana tsy mampino ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Gimp » Fampianarana fototra hianaranao ny fomba fampiasana GIMP
Ahoana ny fomba fanaovana screensaver na sary an-tsary miaraka amin'ny sary Instagram?